Akụkọ - Ndị ala ọzọ na-asụ Chinese nke ọma na-eme nke a!
Ndị mba ọzọ na-asụ Chinese nke ọma na-eme nke a!
N'oge na-adịbeghị anya, nwa akwụkwọ nwere ntọala efu zuru oke, mgbe ọ mụsịrị klaasị atọ, gwara m na ya ga-agbanwe na onye nkuzi nke pụrụ iche na Bekee n'ihi na ọ chọghị ịmụ ụtọ asụsụ China ma ọ bụ ihe metụtara HSK, kama ọ chọrọ ịmụ naanị ụfọdụ asụsụ ndụ ụbọchị, dịka ịzụrụ tiketi ụgbọ elu, otu esi azụ ahịa na Taobao, wdg… nke ọma… Ahụla m ọkwa China ya n'ọdịnihu.
N'agbanyeghị asụsụ ị na-amụ, ọ dị ezigbo mkpa ịtọ ntọala. Tọ asụsụ na okwu bụ isi. Achọrọ m ịgba ọsọ tupu m bilie, enweghị m ike ịnagide obere ikwughachi ihe na-agwụ ike. Enwere naanị otu ngwụcha ma ọ gaghị ekwe omume ịsụ asụsụ a. Eleghi anya, ọtụtụ n'ime ndị na-amụ asụsụ nke abụọ adabala na nzọụkwụ mbụ, naanị ihe ha nwere ike ịmụta ma ọ bụrụ na ha na-anụ ọkụ n'obi maka ịga nke ọma ngwa ngwa na uru ngwa ngwa nwere ike mụta.
Imirikiti ndị ala ọzọ na-asụ Chinese nke ọma ma jiri okwu ziri ezi anyị na-ahụ na ndụ, kedu ka ha si eme ya?
Ga nọ n'ógbè:
N'agbanyeghị ma ị na-amụ asụsụ Chinese na China ma ọ bụ na ọ bụghị, ọ ga-enwerịrị ndị China nọ gị gburugburu iji kpọtụrụ gị. Na nkenke, asụsụ ga-ajari. A ga-echefu ihe ị mụtara na klasị ma ọ bụrụ na ị naghị eji ya oge niile na ndụ. Nwanne nwoke nwoke nke na-ere ihe ncheta na Morocco mụtara Chinese site na tubing wee jiri ya maka ndị njem nleta n'echi ya. O mepere ọnụ ya mgbe o mepere ọnụ ya gwa ndị ọchị ọchị na-ewu ewu na ntanetị n'ịntanetị.
Mgbasa ozi nkịtị:
Ọ dabara nke ọma, anyị na-ebi n'oge ngagharị nke Intanet, a na-akọrọ ngwa ahịa n'ụwa niile, anyị nwere ike iji oge ahụ ekewapụrụ iji mụta vidiyo ndị China na -ekwu na ịgbanye vidiyo ndị China; ma ọ bụrụ na anyị chọrọ icheta Chinese odide, flash kaadị flash. Chi ukwu ndị ahụ dị mma n ọmụmụ asụsụ, ndị anaghị achịkọta ọtụtụ puku awa ma mụta asụsụ mba ọzọ na ụbọchị ole na ole, na-aghọ aghụghọ Yindi.
Soro na mmemme na asụsụ ọhụrụ:
Na-ebute ụzọ isonye na okwu, ihe nkiri, nnabata, ịbụ abụ, wdg, ihe ọ bụla masịrị gị. Mgbe ị na-akwadebe maka ihe omume ndị a, ị chọghị ida ihu gị n'ihu. N'oge a, ị ga-eburu ihe ndị dị n'asụsụ mba ọzọ n'isi nke ọma, ị ga-echekwa echiche nke ọma banyere ịhọrọ okwu na ịme ahịrịokwu, yana ọsọ ịkpọ okwu gị. N'ụzọ dị otú a, ị ga-amụta Chinese ọtụtụ afọ mgbe e mesịrị. O siri ike ichefu.
Jiri ekwentị mkpanaaka gị ka ịdekọ ma gee ntị na ụda mbụ nke asụsụ gị:
Dekọọ otu Chinese ị na-asụ kwa ụbọchị, ọkacha mma na nkọwa ahụ. Ekwenyere m na mgbe ị nụsịrị ịkpọ okwu na-adị gị mma, ị gaghị enwe obi ike ịchị ndị ọzọ ọchị. N'oge usoro a, ị ga - achọpụta na ị maghị etu esi ekwu ihe ị na - ejikarị na ndụ gị, dị ka ebe ịsa ahụ na-asacha akwụkwọ nri, ọkpọkọ, wdg. Somefọdụ n'ime ịkpọ okwu ndị ị na-ekwenyebu nwere ike bụrụ tunda ụda, na ụtọasụsụ ị na-ahụghị nwere ike ọ dị njọ. Chọta nsogbu gị ma ị bụ ọkara agha.
Dị umeala n'obi, ị nweghị ike ijikwa ihe niile:
Obi umeala abụghị agwa mba niile gụrụ, ma ị nwere ike inwe obi ike, atụkwala nganga, enwere ndị ọzọ na mpụga, ị nweghị ike ịmụ asụsụ ọ bụla.
Ọ bụrụhaala na ị bụghị ọnụ na-ekwuchitere ndị Minista na-ahụ maka Ofesi, ị ga-ehie ụzọ ma ọ bụrụ na ị mejọrọ, a gaghịkwa akwụ gị ụgwọ. Ọ bụrụhaala na ị na-ekwu ya, ọtụtụ ndị China nwere ike ịghọta ya, ha na-anabatakwa ịsụ ndị ala ọzọ Chinese. Ozugbo ihere mere ha ma ọ bụ ida n’ihu, ha ga-echeta oge a. Ejighị ahịrịokwu mee ihe, a gaghị achọpụta nsogbu ahụ.
Chọọ akara ngosi asụsụ iji imitateomie:
Chọpụta agwa yiri olu gị ma ọ ga-amasị gị i andomi ụzọ o si ekwu okwu. Nke a dị oke irè iji meziwanye mkpọ okwu gị, ụda olu gị, ọsọ ikwu okwu, wdg.